शम्भु महतो हत्या प्रकरण: प्रदर्शनमा उत्रिए विद्यार्थी « गोर्खा आवाज
शम्भु महतो हत्या प्रकरण: प्रदर्शनमा उत्रिए विद्यार्थी
काठमाण्डौँ । जन्मभुमि भारतको बिहार भएपनि बिगत दुई दशकदेखी नेपाललाई कर्मभुमी बनाउँदै आएका ४२ वर्षीय सम्भु महतोको घरबेटीले पानीको निहुँमा कुटपिट गर्दा मृत्यु भएको छ ।
काठमाडौ किर्तिपुरको नगाउँमा डेरा लिएर बसेका महतोका राहुल र राज तीन छोराहरु छन। उनी १४ महिनाअघि कीर्तिपुर–७ भाजंगलमा बस्दै आएको र भूकम्पले चर्किएको घर मासिक ४ हजारमा भाडा लिएर बसेका थिए।
महतो कहिले मजदुरी गरेर कहिले सार्वजनिक यातायातमा सहचालक त कहिले फलफूल तथा तरकारी व्यवसाय गरेर तीन छोरासहितको परिवार जेततेन चलाउदै आएका थिए।
महतो परिवारमा शुक्रबार घटेको घटनाले उनको परिवार शोकमा परेको छ। कसरी गुजारा चलाउने, तीन छोराको लालनपालन कसरी गर्ने भन्ने चिन्ताले उनकी श्रीमती नितुदेवी चिन्ता र शोकमा डुबेकी छिन। शुक्रबार नै नयाँ कोठामा सरेको भएपनि उनिहरु त्यहाँ बस्न सकेका छैनन्। दोषीलाई कडाभन्दा कडा कारबाहीको माग गर्दै उनिहरु दिनरात महानगरीय प्रहरी वृत्त कीर्तिपुरमा धर्ना दिइरहेका छन्।
‘हाम्रो सम्पत्तिका नाममा केही छैन। भारतमा पनि जमिनको नाममा एक टुक्रा पनि छैन। परिवारको सहारा नै नभएपछि तीन/तीन जना छोराको लालनपालन कसरी गर्ने ? ’, उनले प्रश्न गरिन्, ‘बितेको मान्छे फर्किने कुरा भएन। त्यसैले हामीलाई न्याय चाहिन्छ। परिवारको लालनपालनको व्यवस्था हुनुपर्छ।’ नितुदेवीले आफूलाई न्याय र परिवारको लालनपालनको जिम्मा सरकारले लिनुपर्ने बताइन।
शम्भुका माइला छोरा राजले लकडाउन र निषेधाज्ञाका कारण घर भाडा तिर्न नसकेको बताए। उनले घरबेटी प्रेमकृष्ण महर्जनलाई केही समयपछि एकमुष्ठ भाडा दिने भनेका थिए। तर, घरबेटी महर्जनले भाडा नदिए तुरुन्त कोठा सर्न दबाब दिए। लगातारको दबाबपछि उनले अघिल्लो साता १२ हजार रुपैयाँ घरबेटीलाई दिए। एक महिनाको एड्भान्स दिँदा पनि महर्जनले घर छोड्न दबाब दिए।
‘हामीले एक महिनाको एड्भान्ससमेत दिएका थियौं’, ‘पैसा लिएपछि हामीलाई झन् नराम्रो व्यवहार गरे। घर छाडेर जान धम्क्याए।’ नितुदेविले भनिन।
उनका अनुसार घरबेटीका अरू परिवारले पनि पटक–पटक दबाब दिएपछि शम्भु कोठा खोजीमा लागेको र पहिले बसेको नजिकै कोठा पाएर सामान पुरानै डेरामा भएकाले उनी शुक्रबार पनि सामान ओसारिरहेका थिए। शम्भु पुरानो डेरामा जारमा पानी भर्दै थिए। ड्रममा राखेको पानी जारमा राखेर उनी नयाँ डेरामा लैजाँदै थिए। उनले पानी खन्याइरहेका बेला घरबेटी महर्जन त्यहाँ पुगे। उनले पानी नलैजान भने। तर, शम्भुले आफूले जम्मा गरेको पानी लैजाने जिद्दी गरे।
प्रदर्शनमा उत्रिए विद्यार्थी घरभाडामा बस्नेहरुको ज्यानै असुरक्षित रहेको भन्दै विभिन्न क्षेत्रबाट यो घटनाको भत्सना भैरहेको छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयको परिसर क्षेत्रमा पर्ने सो स्थानमा यहा अध्ययनरत बहुसंख्यक विद्यार्थी भाडामा बस्ने र भोलि सुरक्षाको जिम्मा कसले लिने भन्दै विद्यार्थीहरु समेत घटनाको छानबिन र दोषीलाई कारवाही गर्न प्रदर्शनमा उत्रिएका छन।
प्रदर्शनको नेतृत्व गरेका विश्वविद्यालयमा अध्ययनरत श्याम ओझाले भने “यो मानव हत्या, मानवताको हत्या मात्र होईन भाडामा बसि पढ्नेहरु र मजदुरहरुको मानसिकताको हत्या पनि हो। शम्भु महतो र उनको परिवार मात्र होइन, भाडामा बस्ने सबै माथी अपराध गर्ने प्रेमलाल महर्जन परिवारलाई कडा कार्बाही गर्नुपर्छ !”
त्रिभुवन विश्वविद्यालयका विधार्थीहरु आन्दोलनमा उत्रिए र नाराबाजी गर्दै किर्तिपुर परिक्रमा गरेका थिए ! किर्तिपुर उपमहानगर पालिका कार्यालय र किर्तिपुर प्रहरी वृत अघाडी लामो समय नाराबाजी गर्दै पिडितले न्याय पाउनुपर्ने र दोषीलाई कारबाही हुनुपर्ने माग गरेका छन् ।